खुशीको खबर ! हजारको नोटबाट हट्यो अफ्रिकन हात्ती, राखियो नेपालमै जन्मिएका जुम्ल्याहा ‘राम–लक्ष्मण’ [जानकारीको लागी शेयर गरौँ] – Sanchar Patrika
खुशीको खबर ! हजारको नोटबाट हट्यो अफ्रिकन हात्ती, राखियो नेपालमै जन्मिएका जुम्ल्याहा ‘राम–लक्ष्मण’ [जानकारीको लागी शेयर गरौँ]
July 22, 2020 164
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बुधबारदेखि बजारमा ल्याएको एक हजार रुपैयाँको नयाँ नोटमा नेपालमै जन्मिएको जुम्ल्याहा हात्तीको फोटो राखिएको छ । अहिलेसम्म प्रयोग हुँदै आएको अफ्रिकन हात्तीको फोटो हटेको छ। हजारको नोटमा नेपाली हात्तीको फोटो राख्ने निर्णय राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०६९÷७० सालमै गरेको भए पनि बुधबारदेखि मात्रै नेपाली हात्तीको फोटोसहितको नयाँ नोट बजारमा आएको हो।
हाल नोटमा समेटिएका दुई जुम्ल्याहा हात्तीका ०६५ सालतिर चितवनमा जन्मिएका हुन् । जुम्ल्याहा भएका कारण उनीहरूको नाम ‘राम–लक्ष्मण’ राखिएको थियो। नयाँ नोट छाप्ने २०७० सालको निर्णयलाई २०७७ सालमा मात्रै किन कार्यान्वयन गरियो त ? भन्ने प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले यसको प्रक्रिया ढिलो नभएको दा’बी गरे । उनका अनुसार सम्झौता भएको आठदेखि नौ महिनामा नोट बजारमा आउने गर्छ।
नेपालले नोट समयमै छापिए पनि नेपाल आइपुग्न लकडाउनका कारण केही ढिला भएको बताए । उनले भने ‘यसको प्रक्रिया ढिला भएको होइन। लकडाउनका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा केही समय रोकिएको बाहेक अरू सबै प्रक्रिया द्रू’त गतिमा सम्पन्न भएको छ।’
राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूका अनुसार सो समितिले २०७० सालमा नै निर्णय गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेदेखि छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्नेसम्मको प्रक्रियामा नै ढिलाइ भएको थियो।
Prevकस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ८ गते बिहीबारको रा’शिफल !’
NextOMG>>>१ मिनेटमा ८० हजार शब्द पढ्ने मारियादेखि स्पीड रिडर विजय शाहीसम्म यस्तो छ वास्तविकता थाहा पौड सबै चकित !
पछिल्लो २० दिनमा काठमाडौंमा तीनचोटि भुइँचालो गइसक्यो। किन गइरहेछ खुसुखुसु भुइँचालो?
गोकुल बाँस्कोटाले ‘बनमा काँडा छ’ भन्दै गीत गाउँदा गायक भगवान भण्डारीले फर्काए यस्तो जवाफ
नेपालमा यसरी गरिँदैछ कोरोना खोपको तेश्रो ट्रायल
भाेलि काठमाण्डाैका यी ठाउँमा ८ घण्टा बत्ती जाने